Timo Werner Hooyo Sheeko dheeraad ah Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Jarmalka Timo Werner Hooyo Sheeko dheeraad ah Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhameystiran ee kubadda cagta Germany Jenius kaas oo loo yaqaan naaneyska; "Turbo Timo". Our Timo Werner Sheeko Carqi iyo Warqada Xogta Aan Baadhin Xogta waxay kuu keenaysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la arki karo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor inta fannaanka, nolosha qoyska iyo xaqiiqooyin badan oo OFF-Pitch (wax yar oo la yaqaan) oo ku saabsan isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay xajmiga iyo tamarta garoonka dhexdiisa. Si kastaba ha ahaatee, taageerayaal yar oo keliya ayaa og in Timo Werner's Bio oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Timo Werner Hooyo Sheeko Xogta Warka Xogta Leh -Nolosha Hore
Timo Werner waxa uu ku dhashay maalintii 6th ee Maine 1996 hooyadiis, Sabine Werner iyo Aabe, Maalther Schuh ee Stuttgart, Jarmalka. Timo oo ka muuqata muuqaalkiisa, Timo wuxuu ku dhashay Jarmal saafi ah oo hindhis ah oo xididdada ka soo jeeda jarmalka qotoda dheer.
Horumarinta, waxaa jiray hubaal ah in kubada cagta ay noqon doonto wicitaankiisa. Dhab ahaantii, aabihiis Geerter Schuh wuxuu sidoo kale ahaa ciyaaryahan xirfadle ah oo ciyaaray weeraryahan intii uu joogay.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in Timo uu ka yimid aqal aan caadi ahayn oo leh bilo aad u hooseeya. Koritaanka, waalidiintiisa waxay barteen qiimaha macquulnimada ee loo baahan yahay; (ixtiraamna dhammaan dadka, raalli ahaanshaha / caawimaad, dareen masuulnimo, marnaba waxyeello qofna iyo qiimaha wadaagista). Sida Timo Werner u dhigo;
"Markii aan la joogayo qoyskeyga iyo asxaabteyda ma ahan Timo Werner kubada cagta, waxaan ahay kaliya Timo, wiilka is qabta, saaxiibkiis ... kaliya nin sida qof kasta oo kale ah. Haddii aan sameeyo wax qalad ah kama baqayaan inay ii sheegaan! "
Waalidiintiisi waxay hoos u dhigeen dhulka oo ay macquul yihiin Timo naftiisu waa fiican tahay oo si fiican u shaqeeya. Intaa waxaa dheer, waxaa loo arkaa in uu yahay guusha udub dhexaad ka badan aabihiis. Timo Werner ayaa markasta dib loogu soo celiyay maalmihii carruurnimadiisa ku saabsan sida uu u isticmaali jiray buuraha iyo aabihiis si uu u wanaajiyo joogtadiisa iyo cayaaraha. Tani waxay u muuqatay in la dhiso xirfaddiisa taas oo naxdin leh, looguma arkin sida ugu muhiimsan waalidkiis. Hooyo iyo aabaheedba, waa inay waxbarashadooda ugu horeyaan wiilkooda.
Timo Werner Hooyo Sheeko Xogta Warka Xogta Leh -Dhismaha Xirfadaha
Koritaanka, Timo wuxuu ahaa mid weyn Mario Gomez taageere Isku xirka xaqiiqda ah in aabihiis uu sidoo kale ahaa ciyaaryahan kubadda cagta ah, xiisaha uu u qabo cayaaraha waa mid la hubo. Wareysiga, ayuu u sheegay wariyeyaasha in uu mar hore lahaa sawirro Mario Gomez qolkiisa markii uu ahaa 11-12 sano jir ah sida hoos ku sawiran.
Si ka duwan ciyaartoy badan oo kubadda cagta ah, Timo wuxuu dhammeeyey dugsiga sare. Sida laga soo xigtay Bundesliga website-ka rasmiga ah. Waalidiintiisa gaar ahaan Sabine Werner, (hooyadiis) waxay rabeen wiilkeeda in ay dhameeyaan waxbarashada dugsiga (ugu yaraan, Dugsiga Sare) ka hor inta uusan noqon kubad xirfadle ah. Waqtigaas kadib dugsiga, Timo wuxuu ahaa mid caadi ah mana aha arday aan caajis ah oo xitaa inkastoo uu seegay kala badhkii saacaddiisa (sababtoo ah ballanqaadka kubada cagta) wuxuu awooday inuu qalin-jabiyo 2014 da'da 17.
Timo Werner Hooyo Sheeko Xogta Warka Xogta Leh -Xirfadda Soo-koobista
Xitaa intii uu iskuulka dhiganayay, Timo uu ku faraxsan yahay kubada cagta ayaa arkay isaga oo ku jira liiska kooxda dhalinyarada maxaliga ah ee loo yaqaan TSV Steinhaldenfeld isaga oo siiyay marxaladdiisa si uu u muujiyo tayadiisa. Naadigu waxay sameysay shaqo cajiib ah oo ah dhisida aasaaska xirfadda ee dhalinyarada da'da yar ee loo baahan yahay in si wanaagsan loo maro tartanka dhallinyarada ee VfB Stuttgart.
Timo ayaa u saxiixay VfB Stuttgart kaliya dhamaadka dugsiga sare, oo fulinaya rabitaanka waalidka ee ku aaddan iskuulka kahor inta aysan diirada saarin kubadda cagta.
VfB, xirfaddiisa ayaa qaadatay a korodhka cimilada oo wuxuu arkay naftiisa oo kor u kacay oo ka sarreeya dhammaan dhalinyaradii, taas oo soo jiidatay xiisaha kooxaha naadiyada waaweyn ee Yurub oo dhan. Tani ma badalin dabeecaddiisa ama habka hoos-u-dhaqanka ee xirfaddiisa.
2016, Werner ayaa u dhaqaaqay RB Leipzig meel kasta oo ay joogaan. Wuxuu saameyn deg deg ah ku yeeshay kooxdiisa cusub, isagoo u dhaliyey xilli ciyaareedkiisii ​​21 ee 31 xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeysay. Horyaalka kubada cagta Jarmalka wuxuu u horseeday naangiisa labaad; RB Leipzig shidaalka shidaalka. Tani waxaa soo raacay wicitaan ah kooxda xulka Jarmalka by Joachim Löw.
Dhab ahaan, Mario Gomez oo mar ahaa halyeeygii uu hadda noqday mid ka mid ah tartankiisa xulka qaranka Jarmalka.
Si kooban, Timo waa runtii, xubin firfircoon oo jiilka dahabiga ah ee Jarmalka. Waxa uu shaki ku jiraa, talada dabaysha ugu weyn ee tan iyo tan Mario Gomez.
Timo Werner Hooyo Sheeko Xogta Warka Xogta Leh -Nolosha Xiriirka
Markuu arko guulaha uu gaadhay, Waa caadi in aad akhristaha maqaalkani si aad u ogaatid cida Timo la kulantay. Shaki kuma jiro, Timo waa xiddig garoonka dhexdiisa ah. Awoodiisa ciyaarista, iyo sidoo kale inuu ogaado qaab nololeedkiisa garoonka dhexdiisa ka caawinaya inuu abuuro sawir buuxa oo isaga ah.
Adeero iyada sawiro muujinaya muuqata quruxda dhabta ah, waxaa lagu eedeynayaa in Julia uu yahay tusaale ama laga yaabo inuu yahay qaab jirdhis.
Hase yeeshe xaqiiqo xoogan oo aan ku celineyno sheegashadayada, malaha waxa lagu bartilmaameedsanayo barta furan. Timo ayaa la kulmay kooxda Stuttgart sida Julia Nagler tan iyo markii uu kubada cagta ciyaarayay. Xiriirkoodu wuxuu ka kordhay xaalada saaxiibtinimo ee ugu fiican, waxaana uu ku dhammaaday jacayl dhab ah Labadaba jecel waa kuwo aad u yar. Timo waa hal sano ka weyn julia Nagler oo arday ah oo dhigta Jaamacadda Stuggart.
Julia ma noqon karto gabadhii ugu quruxda badnayd ee Jarmalka laakiin waxa ugu muhiimsan waa Timo ayaa qalbigeeda siisay.
Labada lamaane waxay doorteen sir haynta xiriirka ay la leeyihiin xiriirka sirta ah, si ay u ilaaliyaan xidhiidhkooda. Inkastoo ay u socdaan warbaahinta bulshada ee Timo Werner, ma jirto xidhiidh muujinaya mawaadiicda laakiin lama ogaanno xaqiiqda qarsoon. Qaar badan ayaa sameeyay qiyaasta ah in Timo uu yahay hal jilicsan oo uu jabiyay Julia, si kastaba ha ahaatee, jacaylka lamaanaha ayaa lagu soo waramayaa in uu ka xoog badan yahay farriimaha warbaahinta. Xilliyadii ka dib markii ay maqleen xadhigoodii, labaduba waxay go'aansadeen in ay wadaagaan sawirkooda (sida hoos loo arko) iyaga oo doonaya in ay ka cabsi galiyaan haweenka fikradda ah in ninka Julia uu yahay mid keliya.
Isagoo xukumi doona noloshiisii ​​hoose-iyo-hoos-u-dhaca, waxa kale oo uu caddeeyay in weeraryahanka kubada cagta Jarmalka uu xor ka yahay qoraalladii hore.
Waa hagaag, xitaa haddii aysan ahayn warbaahinta bulshada, labada lamaane ma seegaan si ay ula wadaagaan daqiiqado quruxsan marka ay wadaagaan muuqaalka guud. Ku soo laabashada 2017, Timo Werner iyo saaxiibtiis Julia waxay soo dhaweeyeen jacaylka ay u qabaan xafladaha 2017 ee qaybta VIP ee Red Bull Arena iyo martida 600, oo ay ku jiraan kooxda Bundesliga iyo dhammaan shaqaalaha. Hoos waxaa ku yaal sawirka lamaanaha quruxda badan.
Si kastaba ha ahaatee, Timo iyo gabadha saaxiibka ah Julia ma aysan soo saarin wararka ku saabsan ka qaybgalka ama qorshaha guurka, laakiin sida ay u muuqato, maalinta ma aha mid aad u fog. Iyaga oo jilaya habka ay u jecel yihiin midba midka kale, waa arrin kaliya waqtigii ka hor intaysan guursan AMA MAYA. Haa !! waxaan dhihi karnaa. Waxaa laga yaabaa inaysan guursan Dad badan ayaa sabab u ah isbedelka qoysaska Timo Werner ee lagu soo bandhigay Qaybta Nolosha Qoyska ee hoos ku xusan. Si kastaba ha ahaatee, LifeBogger waxay jecelyihiin iyaga oo ah kuwa ugu fiican, farta ka gudba!
Timo Werner Hooyo Sheeko Xogta Warka Xogta Leh -Nolosha Qoyska
Ka bilowida xaqiiqooyin badan oo ku saabsan qoyskiisa, waxaa muhiim ah in la ogaado in waalidkii Timo Werner ay yihiin xaas la'aan. Sideenu u ogaanay tan? Marka la eego baaritaan taxadar leh, waxaan aragnaa in Timo uu magaca hooyadiis ugu magac daray halkii uu aabihiis u haysan lahaa sababo aan weli la aqoon. Hase yeeshee, dhowr bog oo Jarmal ah ayaa u qiray in xaqiiqda ah in labada waalid iyo aabahaba ay yihiin kuwo aan is qabin.
Sida lagu sheegey horraantii maqaalkani, hooyada Timo waxay magaceeda ku dhejisaa Sabine Werner halka aabbihiisna uu magaciisa ku magacaabo Maalther Schuh. Inkasta oo ay xaqiiqooyinkani yihiin, waxa muhiimka ah ayaa ah xaqiiqda ah in qoyskiisa loo tixgeliyo dhulka iyo Timo ayaa ku faraxsan inay ka timaado guri sidan oo kale ah.
Timo Werner Hooyo Sheeko Xogta Warka Xogta Leh -Dhibaatada Neefsashada iyo Neefsashada
2017, Timo Werner ayaa hal mar la bedelay ka dib markii 32 daqiiqo uu ciyaaray RB Leipzig's Champions League kulankii Besiktas ee ka dhacay Vodafone Arena ee Istanbul, Turkey. Tani waxay ahayd sababtoo ah wuxuu yeeshay neefsasho iyo dhibaatooyin wareega hawada oo ay sababtay taageerayaasha qaylada. Mucaaradka colaadaha ah ee ka socda Turkiga ayaa ka tagay Timo si xoog leh. Markii ugu horreysay ee uu jawaab celiyo, wuxuu si bareer ah isku dayay inuu codka ka xayuubiyo isaga oo dhegaha faraha isaga saaraya xitaa inta uu kooxdiisii ​​u baahn lahaa inuu weeraro iyaga oo ujeedadoodu ahayd.
Buuqa ayaa aad u kacsan oo aan xakameynin in Werner la siiyay dhego gashi uu tababare u yahay. Dhibaatada ka dib, Timo ayaa lagu bedelay daqiiqado 31 kulankii Champions League, halka kooxdiisa ay wali xajisantay 1-0. Tani waxay timid ka dib markii uu ku adkeystay inuu doonayo inuu ka tago garoonka. Ciyaarta ka dib ciyaarta tababaraha ayaa yiri:
"Waa suurtagal in la diyaariyo kooxdaada jawi sidan oo kale ah. Waxaa jiray qaylo dhego-culus oo Timo neceb yahay. "
Laakiin wuxuu ku daray:
"Aniga ahaan, tababare ahaan, waa muhiim in la arko cida aan ku kalsoonahay waqtiyada kuwaan oo kale ah. mid ka mid ah diyaar u ah inuu naftiisa difaaco, isagoo ka dhawaajiyay sawirada taageerayaasha Turkiga. "
Tababaraha RB LEIPZIG Ralph Hasenhuttl ayaa su'aal ka keenay mustaqbalka Timo Werner ee lagu waydiin lahaa bedelka Besiktas.
Timo Werner Hooyo Sheeko Xogta Warka Xogta Leh -Xaqiiqda Xawaaraha
Timo Werner ayaa hal saacadood xaddiga 11.11 ka qaaday mitirka 100. Tani waxay ahayd sida uu naanaysta ugu horeeyay u helay; 'Turbo Timo"warbaahinta Jarmalka sababtoo ah xawaare adag.
Hase yeeshee, riwaayadiisii ​​ayaa la xiriirtay qaab ciyaareedkiisa taatikada garoonka dhexdiisa, isaga oo siinaya qiimeynta FIFA ee soo socota. Iyadoo lala xiriirinayo da 'yarkiisa, waxa loo arkaa bartilmaameed udub dhexaad u ah ciyaartoyda ciyaaraha adduunka ee ciyaaraya Master League.
Ka dib markaa sanadkiisii ​​ugu dambeeyey ee dugsiga, Timo oo ahaa 17-sano jir wuxuu ku socday mitir 100 wax yar kow iyo toban ilbiriqsi.
Timo Werner Hooyo Sheeko Xogta Warka Xogta Leh -United Dream
Waqtiga qorista, Timo Werner waxay leedahay qandaraas la leh RB Leipzig kaas oo lagu sii darayo ilaa 2020. Si kastaba ha ahaatee, Timo ayaa shaaca ka qaaday inuu doonayo inuu u dhaqaaqo Premier League islamarkaana uu si gaar ah u jeclaan lahaa Manchester United sababtoo ah taariikhdooda iyo phylosophy.
In uu erayada ...
"Haa, ka ciyaarista Premier League waa riyadeyda. Waxaan jeclaan lahaa inaan u ciyaaro labo ama seddex kooxood, Manchester United ayaana ka mid ah kooxahaas. Laakiin waxaa laga yaabaa in sanadaha soo socda - dambe, marka Ingiriiskaygu wax yar ka fiican yahay! Waan ku raaxeystaa RB Leipzig, inkastoo, "
Hubinta FACT Waad ku mahadsantihiin akhrinta Timo Werner Storyhood iyo xaqiiqooyin aan ku qorneyn. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!
Kai Havertz Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
Shkodran Mustafi Sheekada Sheeko Xogta Warka Xadidan
Julian Brandt Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weyn
Thomas Muller Storyhood Story Sheekooyinka dhabta ah ee sheekooyinka
Leroy Sane Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
Jerome Boateng Sheeko Xeelad ah oo Xogta Loo Yaqaano
Per Mertesacker Sheeko Xeelad ah oo Xogta Laga Heli Karo Xogta Lahaanshaha